Janet Museveni, Ayaa Loo Magacaabay Wasiirka Waxbarashada iyo Isboortiga Uganda – STAR FM SOMALIA
Yoweri Museveni ayaa Wasiirka Waxbarashada iyo Isboortiga u magacaabay xaaskiisa Janet Museveni, waxaana arrintan ay noqotay mid hadal heyn badan dhalisay.
Janet ayaa Wasaaradda loo dhiibay ee Waxbarashada iyo Isboortiga ah kuwa ugu muhiimsan, waxaana loo arkaa mid ka mid ah wasaaradaha ugu miisaaniyada badan.
Mr Museveni ayaa dib u soo celiyay Wasiirkiisa arrimaha Dibadda Sam Kutesa, halka dhowr Wasiirna uu xilka ka qaaday.
Hey’addaha Xuquuqda Aadanaha ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Museveni kali talisnimo, waxaana horay reer galbeedka ay shaki geliyeen doorashadii dhacday bilo ka hor.
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa ka mid ah hoggaamiyeyaasha ugu xukunka dheer Afrika, waxaa uu sanadkii 1986 la wareegay talada dalka.
Diyaarad laga leeyahay Masar oo si deg deg ah u degtay, kadib bam looga shakiyay